Mmekọrịta: Otu ndị na-azụ ahịa si eme ka mgbasa ozi nke ndị nwe ha nwekwuo ụgwọ ma kwụrụ ụgwọ na Media | Martech Zone
Monday, December 18, 2017 Tuesday, January 12, 2021 John Koetsier
Na-emeso ahịa a na-akwụ ụgwọ ma nwekwaa ahịa dị iche iche na-efu ndị na-ere ahịa mgbanwe, ogo na nnweta. Imirikiti ndị na-ere ahịa na-enyocha ọwa iche iche, ma ọ bụ, kewaa ụgwọ, akwụ ụgwọ, yana ahịa.
Leave hapụ 50-100% nke nsonaazụ gị nwere na tebụl.
N’oge na-adịbeghị anya, ajụrụ m ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu narị CMO na ndị isi ahịa azụmaahịa: Kedụ ka esi eme ka ndị ahịa na ndị ahịa na-akwụ ụgwọ ma na-eme ka ibe ha dịkwuo elu? Ha -aza, nwere nghọta dị ịtụnanya, ma nyekwa ihe akaebe siri ike na ndị na-ere ahịa kwesịrị ịchọ ma jiri ọnụọgụ ọ bụghị naanị n'ime kamakwa niile n'etiti ọwa ahịa ha niile.
Social bụ ihe atụ doro anya.
Imirikiti ụdị ihe ọ juiceụ juiceụ ihe ọ organicụ organicụ na-elekọta mmadụ na obere ụgwọ. Mana ụfọdụ ndị na - ere ahịa na - achọpụta na uru ha na - abawanye karịa nsonaazụ mgbasa ozi ka mma. Ọmụmaatụ, ikekwe… ka organic search ahịa.
Anyị malitere mgbasa ozi Facebook Ad iji kwalite njem na-akwụghị ụgwọ. Nke a emeela ka ọtụtụ puku mmasị, mbak, tweets na ihe njikọ 50 sitere na blọọgụ njem. Ntughari ahia anyi choro nke oma site na 35% n'ime ọnwa ole na ole n'ihi na ndi mmadu na ndi mmadu na-abanye na ya bu isi ihe di na Google algorithm. Amine Rahal, onye nchoputa na onye isi nke Little Dragon Media
Yabụ, na-akwụ ụgwọ na-elekọta mmadụ dugara na-elekọta mmadụ na-eduga na-akpata SEO akpata na-ekesịpde nwere okporo ụzọ weebụ.
Nke ahụ bụ ọmarịcha ihe kpatara ya, ma ọ bụrụ na ị bụ onye na-azụ ahịa yana oke ego.
Ihe atụ ọzọ? Lezienụ-kwa-pịa organic SEO.
Naanị eziokwu ahụ ị na-ebugharị okporo ụzọ ndị ọzọ na ihe nrụọrụ weebụ gị nwere mmetụta dị mma:
Ná nkezi, anyị ahụla 10 ka 20% na-ebuli elu na nyocha ọchụchọ maka isiokwu na nkebi ahịrịokwu ebe a na-etinye mgbasa ozi, ọkachasị na ọchụchọ ndị a ma ama. Mgbasa ozi ndị ahụ dịkwa oke ọnụ ma na-arụ ọrụ nke ọma, ebe ọ bụ na ha na-akwụkarị ụgwọ. Kent Lewis, onye nchoputa na onye isi oche nke Anvil
Gịnị kpatara nke a ji arụ ọrụ?
Laura Simis nke Coalmarch na-ekwu na ebe ọ bụ na okporo ụzọ peeji bụ ihe dị mkpa na nsonaazụ ọchụchọ engine peeji nke, ịkwalite okporo ụzọ gaa na ibe peeji nke site na mgbasa ozi akwụ ụgwọ nwere ike melite ikike ibe ahụ ịhazi nke ọma.
Ya mere, olee ụdị mbuli ị nwere ike ịmepụta site na usoro a nke ijikọ SEM na PPC? Ndị ahịa m nyochara kwuru na nsonaazụ ha sitere na 10 ruo 40% bulie. Nke ahụ nwere ike ọ gaghị emebi ụwa… mana ọ bụ n'efu.
Otu ihe na-akpali mmasị n'ezie: organic SEO na-akwụ ụgwọ Google ụlọ ahịa mgbasa ozi.
Nke a rụpụtara oke mmụba 7X na ntinye ego maka otu ahịa.
Alison Garrison, onye isi nduzi ahịa na Volusion, ihe ecommerce n'elu ikpo okwu maka SMBs, hụrụ ogologo ọnwa 12 'uru nke njikarịcha nchọta ihe nchọta kụrụ ụgwọ na-akwụ ụgwọ mgbe ọ gbakwunyere mgbasa ozi Googlezụ ahịa Google.
Mgbe ịchisịrị mkpọsa ịzụ ahịa ịzụ ahịa, ọrụ SEO nke na-aga ihe dịka otu afọ nwetara nnukwu traction, yana ahịa site na nchọta ihe ọkụkụ mụbara 325% na mkpokọta ma karịa 400% site na ekwentị naanị otu afọ. Alison Onyekwu
Ma revenue kpam kpam kpamkpam site n'elu ụlọ nakwa… gụnyere organic search revenue.
Ego ha nwetara site na nyocha ihe omumu riri elu site na 240% n'oge ahu. Feedszụ ahịa na mgbasa ozi bụ isi ihe ịga nke ọma ebe a - ngụkọta okporo ụzọ mụbara karịa 2,500%, ọnụọgụ ekwentị na-arị elu karịa 10,000%, ego rịrị elu karịa 800%, ego mkpanaka mụbara karịa 80,000% - ọ bụghị ụdị.
N'ụzọ doro anya, onye ahịa ya na-amalite site na obere isi weebụ na ego mkpata. Na, enwere uzo ozo di mkpa abuo. Otu: o tinyere ego na afọ zuru ezu na njikarịcha search engine. Nke ahụ bụ nraranye na mbọ - na anya dị ogologo - nke anaghị ahụkarị. Ma abụọ: kilomita gị nwere ike ịdị iche. Ebe ọ bụ na otu ndị ahịa na-achọ ọnwa ma na-akụ kpakpando apụtaghị na ndị ahịa ọ bụla ga-enweta otu ihe ahụ.
N'agbanyeghị nke ahụ, nsonaazụ ya na-atọ ụtọ.
Ma, opekata mpe, nsonaazụ Garrison gosipụtara mkpa ọ dị mmekọrịta n'etiti ọwa ahịa. Ndị na-ere ahịa na-anaghị achọ ma na-erigbu mmekọrịta dị n'etiti ọwa ahịa ndị akwụ ụgwọ na nke organic na-efunahụ ọla edo dị ọcha.
Ọmụmụ ihe zuru oke na nghọta sitere na ndị ahịa niile m gwara okwu dị n'efu ebe a.
Download Ihe Omumu zuru ezu Ebe a
Tags: Alison OnyekwuAllison aghaanvilkolmaKent Lewislaura kwurumarketingahia ọwaomnichannelmgbasa ozi organicnyocha ọchụchọorganic seonwere mgbasa oziakwụ ụgwọ mgbasa oziakwụ ụgwọ ọchụchọppcvolluji
John Koetsier bụ onye nta akụkọ, onye nyocha, na ọdịnihu. Dị ka Mobile Economist na TUNE, M na-ebu amụma ma nyochaa ọnọdụ ndị na-emetụta ụmụ anụmanụ na ekwentị mkpanaaka. M na a odeakụkọ, nyocha, na ụlọ ọrụ Executive, na nwere chronicled ịrị elu nke mobile aku na uba. Tupu m banye na TUNE, wuru m VB Insight research team na VentureBeat ma jikwaa otu ndị mepụtara ngwanrọ maka ndị mmekọ dịka Intel na Disney. Na mgbakwunye, Etuola m ndị ọrụ aka, wuru saịtị mmekọrịta na ngwa mkpanaka, ma jụọ maka ekwentị, mmekọrịta mmadụ na ibe, na IoT Na 2014, akpọrọ m na Folio si n'elu 100 nke ụlọ ọrụ mgbasa ozi "ọtụtụ ndị ọchụnta ego ọhụrụ na ahịa shaker-elu." M na ezinụlọ m bi na British Columbia, Canada, ebe m na-azụ baseball na hockey, ọ bụ ezie na ọ bụghị n'otu oge ahụ.
Iguzosi Ike n'Ihe Branddị Ahịa Ọ Nwụla n'Ezie? Ma ọ bụ iguzosi ike n'ihe nke ndị ahịa?